दुवै नेकपाको जवाफ पर्खिंदै आयोग ! – Interview Nepal
दुवै नेकपाको जवाफ पर्खिंदै आयोग !
काठमाडौ , पुस २१। नेकपा विवादका विषयमा दुवै समूहले जवाफ पठाएपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले काम अघि बढाउने भएकोे छ। आयोगले ओली र दाहाल–नेपाल दुवै पक्षलाई पत्राचार गरिसकेको छ। प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले पत्रको जवाफ आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ संशोधन गरी निर्वाचन अवधिमा दल दर्ता र विवाद निरुपण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीका दुईवटा व्यवस्था हटाएर एउटा थप गरिएको छ। आयोगले नियमावलीको नियम ५ ९८० हटाएको छ। नियम ५ मा छुट्टै दल बनाउने व्यवस्था छ। यसको उपनियम ८ मा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए पनि निर्वाचन अवधिभर छुट्टै नयाँ दल बनाउने सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिनेछैन’ भन्ने उल्लेख थियो। प्रवक्ता श्रेष्ठले यो नियम झिकिएसँगै अब निर्वाचन अवधिमा पनि नयाँ दल दर्ता गर्न सकिने बताए।
यस्तै नियम २३ ६ पनि झिकिएको छ। नियम २३ मा विवाद निरुपण प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था छ। यसको उपनियम ८ मा ‘यस नियममा अन्यन्त्र जनुसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपणसम्बन्धि कुनै कारवाही गरिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्था हटाइएपछि अब निर्वाचन अवधिमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपण हुने भएको हो। जुनसुकै अवस्थामा दलका विवाद समाधान गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ।
नेकपाको विवाद निरुपण गर्ने उद्देश्यले आयोगले नयाँ व्यवस्था गरेको देखिएको छ। आयोगले नियम १६ १ मा १ क थप गरेको छ। नियम १६ मा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न निवेदन दिने व्यवस्था छ। संघीय संसद्मा सहभागी दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित रीतपूर्वक निवेदन दिए दल दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधान र कानुन बाझिएकाले नियमावली संशोधन गर्नुपरेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका पूर्व कामु प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले तत्कालको समस्या समाधान गर्न आयोगले नियमावली संशोधन गरेको हुन सक्ने बताए। ‘अप्रत्यासित र अपर्झट निर्वाचनको घोषणा भएकाले आयोगले नियम संशोधन गरेको हुन सक्छ’, गुरुङले भने, ‘नियम संशोधन आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रकै विषय हो र यो नकारात्मक रूपमा पर्दैन।’ आयोगले काम गर्न सजिलोका लागि नियमावली संशोधन गरेको देखिएको उनको भनाइ छ। अन्नपुर्ण पोष्ट